Monday September 18, 2017 - 10:25:10 in Wararka by Super Admin
illaa iyo shan carruur ah ayaa dhimatay kadib markii uu dab ka kacay guryo kuyaal xaafadda Farjanno ee magaalada Kismaayo, goob joogayaal ayaa sheegay in afar guri ay gubteen kadib markii dab aan la ogeyn cidda ka dambeysay uu qabsaday.
Ugu yaraan 5 qof oo ahaa carruur ayuu dabku dilay halka guryo afar gaaraya ay gubteen, carruurta dhimatay oo dhammaantood isku qoys ahaa ayaa la sheegay oo hooyadood ay albaabka gadaal uga xirtay taasi oo keentay in carruurtu waayaan meel ay uga baxsadaan dabka.
Musiibadan ku habsatay qoyska ayaa si aad ah looga hadal hayaa magaalada Kismaayo, sidoo kale sedax guri oo ka baxsan guri dadku ku dhinteen ayuu dabku qabsaday balse majirin wax khasaara nafeed ah oo ka dhashay marka lagasoo tago hanta baaba’day.
Magaalada Kismaayo malahan dabdamis arrinkaas oo sare uqaadaya khasaaraha marka uu dab ka kaco suuqyada ganacsiga ama guryaha caadiga ah.
Halkan ka dhageyso Wareysi lala yeeshay qof daris la ahaa carruurta gubatay MP3